Biodiversity Vision - Biodiversity Extinction XH
Ukuphalala kwezinto eziphilayo
Izinto eziphilayo ezahlukeneyo zithetha inani kunye neendidi zezinto eziphilayo esinazo kwihlabathi liphela kunye nasekhaya. Oku kubandakanya izilwanyana, izityalo, isikhunta, ibhaktiriya kunye algae.
Ngenxa yezenzo zomntu le ntlobo yantlukwano iyancipha ngokukhawuleza kwihlabathi jikelele, kangangokuba umntu unokuwuthatha njengomnyhadala wokuphela. Esona siganeko sitshabalalisayo sakha sabona xa iidinosaurs zisweleke. Kungathiwa izityalo nezilwanyana ezohlukeneyo ziya kuhlala ziluhlobo olunye okanye kolunye uhlobo njengoko lwenzayo emva kokutshabalala kweedayinaso, kodwa oku kungathatha ixesha elide kwaye kungabi ngaphambi kokuba uhlobo lomntu uqobo lwalo luphele.
Sityala lethu kwizizukulwane ezizayo ukuba simise oku kwehla ngokukhawuleza kwendalo. Ilizwe elingenazintlobo-ntlobo zezinto eziphilayo liyaxakeka kwaye linokusongela ubethu ubomi. Kuyaphikiswa ukuba indyikityha yeCoronavirus Covid19 sisiphumo solwaphulo-mthetho lwethu oluqhubekayo.
Okwangoku ukwehla ngokukhawuleza kweendlela ezininzi zobomi. Indawo yokuhlala ethatha ixesha elide ukuba ichache iyalahleka. Ukwahluka kweentaka, iintlanzi, ibhabhathane nezinye izinambuzane kuncipha ngokukhawuleza. Kunokutshiwo okufanayo ngokwahluka kwezityalo nakwizilwanyana ezahlukeneyo, kubandakanya nezilwanyana zasekhaya kunye nezasekhaya.
Kutshanje kuye kwajoliswa kakhulu kutshintsho lwemozulu. Nangona kunjalo, kuyo yonke intetho kunye neetekhnoloji ezintsha ezifakwayo ukuba zisetyenziswe kakuhle ukuze zivelise amandla, ukusetyenziswa komhlaba wonke jikelele ngokudibeneyo kwegesi ezinamandla akwehli kwaye ngenxa yoko umlo wethu ochasene notshintsho lwemozulu awuphumelelanga. Isizathu esinye sesi kukuba iiplanethi ngokubanzi zabantu ziyakhula kwaye ukusetyenziswa komntu wonke kuyanda.
Utshintsho lwemozulu yenye yezinto ezichaphazela iyantlukwano yeentlobo zezilwanyana. Xa ujongene nomlo osoyikayo ngokuchaseneyo notshintsho lwemozulu sifuna kakhulu isiCwangciso B okanye ezinye iindlela zokongeza ezizezinye. Leyo sisihloko sethu.
Kukho eminye imibutho ngaphandle eyenza umsebenzi olungileyo, ezinye iimfazwe ziyaphumelela kodwa imfazwe ngokuchasene nokulahleka kwendalo iyalahleka. Sifuna ukuyitshintsha loo nto.
Isicwangciso sethu esihle
ukubonisa kwizopolitiko ukuba abantu bafuna iziphumo ezizizo kwaye
ukusebenzisana nososayensi kunye neminye imibutho ukujongana nentloko yokulahleka kweentlobo ngeentlobo zezilwanyana.
Ungasinceda ukuba umbono wethu uzaliseke ngokwazisa igama. Oko kukwabelana ngekhonkco lethu nokukhuthaza abantu ukuba bavakalise inkxaso yabo ngokujoyina (nokuba kunjalo kuphela) kwaye / okanye ngokuzithandela kunye / okanye ukunikela.